Fanehoankevitra Iraniana Momba Ny Fifidianana · Global Voices teny Malagasy
Fanehoankevitra Iraniana Momba Ny Fifidianana
Voadika ny 19 Desambra 2017 5:11 GMT
Ity misy topimaso kely momba ny fanehoankevitry ny blaogy Iraniana mikasika ny fandresen'ny fondamentalista tamin'ny fifidianana Filoham-pirenena Iraniana natao ny Zoma 24 Jona 2005:
Manamarika i Hoder fa ”resy vokatry ny politikany ” i Rafsanjani. Tao anatin'izany lahatsoratra izany ihany, tsipihany ireo tetika sasantsasany izay tokony hampiharin'ny hetsika reformista raha toa ka te-hanaparitaka ny hafany izy ireo.
Manana ny heviny mikasika ny dikan'ilay fifidianana Atoa. Behi: ”Jereo hoe iza no tamy, mpiaro fatratra ny nentindrazana, izay mahatonga ny maha-Iraniana ho manala baraka. … mitsingevana eo ambonin'ny fahatahorana fahantrana sy ny tsy fisian'ny maro manohana fanavaozana i Ahmadi Nejad.”
Jery manaiky ny lahatra no alain'ny Under Underground manoloana ny valim-pifidianana, milaza fa na ho tsara na ho ny ratsy indrindra, efa i Ahmadinejad no Filohan'i Iràna ankehitriny; manantena fotsiny izy fa tsy hanimba azy ilay filoha vaovao…
Manazava ny fomba nilalaovan'ny mullah ny lalaom-pifidianana toy ny lokanga fitendry ny Iranian Diaries: ”Ankehitriny dia efa azoko antoka fa tena lalao natao hampisehoana azy amin'izao tontolo izao ny lalao fifidianana filoham-pirenena rehetra teto Iràna.”
Misaotra tamin'ilay fanaovana ankivy: misaotra ireo fiarahamonina Iraniana any am-pitan-dranomasina ny Another Irani Online tamin'ny tsy fifidianana, ary manontany hoe oviana izy ireo no hiverina amin'ny taniny mba hioty ny vokatry ny ezak'izy ireo…
Manamarika ny Brooding Persian fa ”Tena kivy / mahakivy tanteraka ny Blogistan Iraniana antsika. Ny ankamaroan'ny lahatsoratra dia mihazohazo eo anelanelan'ny ompa feno hatezerana ho antsika izay nanao ankivy, na ireo olona niisa 17 tapitrisa nifidy ho an'ilay Filoha vaovao ary/na mahatsiaro malahelo an'ireo nifidy ho an'ity mpamono olona-mpanankarena Rafsanjani ity.” Asongadiny ihany koa fa ”iray amin'ireo mpanoratra antsika malaza indrindra no mampiavaka io zava-nitranga tena mendrika ho tsarovana io toy ny fandresen'ny tsy fahalalana manoloana ny tsy rariny.”
Ary farany, nahita ny lafiny mazavazava kokoa ny Iraniana Truth: ”Manome toky aho fa tsy hiantso an'i Ahmadinejad amin'ny anarany mihitsy i Bush noho izy tsy afaka ny hanao izany fotsiny.”
Hisy fandrakofana fanehoankevitra bebe kokoa ao amin'ny Global Blog Roundup ny Alatsinainy 27 Jona 2005.